20 Iiholide zosapho ezingamaxabiso aphantsi - Uhambo
Uthando Lwezesondo Ifashoni Yomtshato Kwiindaba Uxinzelelo Ukutya Ukulungiswa Kwangoko Abaphumeleleyo Izilwanyana Zasekhaya #isenzosichasene Nokuxhatshazwa Iinwele
20 Iholide zeNtsapho ezingamaxabiso aphantsi ongakhange ucinge ngaphambili
Ukucwangcisa iholide enkulu yosapho kunokuziva ngathi ngumceli mngeni, ngakumbi ukuba usebenza kuhlahlo-lwabiwo mali oluthile. Endaweni yokwenza into endala efanayo (okanye ukuyeka nje ukuya Ihlabathi leDisney kwakhona), kunokwenzeka ukuba uze nombono wokuyila ongadingi ukubhabha kwihlabathi liphela okanye ukuchitha itoni yemali. Nazi iholide ezingama-20 zosapho ezingabizi kakhulu kuhambo lwakho olulandelayo kunye neqela lonke.
Ezinxulumene: Yintoni i-'Micro-cation 'kwaye kutheni i-Millennials igxile kubo?
UKirsty Lee / EyeEm / Getty Izithombe
1. Jonga kwikomkhulu laseMelika
Umzobo ophambili weWashington, DC yiNational Mall, apho zonke iimyuziyam zinika ukungena ngokukhululekileyo kubakhenkethi. Uninzi lwezikhumbuzo zesizwe zikhululekile ukuba ziphonononge kwaye iZoo kaZwelonke yamkela iindwendwe ngaphandle kwentlawulo yonke imihla yonyaka. Ukugcina ixabiso liphantsi, cinga ukubhukisha ihotele eMaryland okanye eVirginia endaweni esembindini wedolophu, kwaye usebenzise i-DC Metro endaweni yokuqesha imoto.
UMichael Verdoux / EyeEm / Getty Izithombe
2. Qhuba uye eCanada
Abo bahlala kuNxweme oluseMpuma banokuyipakisha ngokulula imoto besiya emantla baya eMontreal, isixeko esidlamkileyo esigcwele iimyuziyam kunye neepaki, ngelixa abo bakwiNtshona yoNxweme kufuneka baqhube baye kwisixeko saseVancouver. Ukushiya i-United States kunokwenza ukuba kube ngathi ikhefu elinobuzaza, kodwa ukuwela umda ngemoto kushiya ubunzima bezikhululo zeenqwelo moya ngasemva. Kuninzi ukubona eCanada, kubandakanya iToronto kunye neNiagara Falls, kwaye lukhetho olufanelekileyo kwiintsapho ezifuna ukugcina izinto zisondele ekhaya.
Ihotele eSirata Beach
3. Bhukisha i-Local All-inclusive
Sukuba nexhala malunga nazo zonke iindleko zokongeza ngexesha leholide ngokubhukisha kwindawo ebandakanya konke. Ezi zithandwa kakhulu eMexico nakwiiCaribbean, kodwa akudingeki ukuba uhambe kude ukuze ufumane into enhle. Indawo yokuhlala yoTyler Indawo yoSapho eVermont inikezela ngeeholide zosapho zonke ezibandakanya amaxabiso afanelekileyo kwiinyanga zasehlotyeni, ngelixa Ihotele eSirata Beach ePete Beach, eFlorida, ikunika iholide enkulu yaselwandle ngenqanaba elinye lokubandakanya.
Incindi yeswekile iyatshisa okanye iyabanda
Ifoto nguGrandriver / Getty Izithombe
4. Thatha uhambo ngohambo
Phosa umva kwiintsuku ezindala ezilungileyo ngokuqalisa uhambo ngololiwe. Nokuba ufuna ukugcina izinto kufutshane nasekhaya ngohambo oluya e-Amtrak e-U.S. Okanye ufumane uhambo ngenqwelomoya oluya eYurophu ukuze ujikeleze amazwe afana neFrance, iJamani ne-Itali kudlula uloliwe, kukho uhambo olukhulu loololiwe kuzo zonke iintlobo zabahambi. Zama Umakhi wase-Amtrak indlela yamagqabantshintshi eGlacier National Park yaseMontona kunye neColumbia River Gorge. Olunye uhambo olumangalisayo ngololiwe phakathi kweVienna kunye neGraz, e-Austria, apho ungabona khona iinqaba zokwenene ezivela kwiifestile. Abantwana bayayithanda le whimsy yayo kwaye uyayixabisa imoto yebar.
Mitch Boeck / EyeEm / Getty Izithombe
5. Hlala kwiYMCA yeeRockies
Ifumaneka e-Estes Park, eColorado, the I-YMCA yeeRockies Unayo yonke into onokuyifuna kwikhefu losapho elinomdla. Qeshisa ikhabhathi okanye ubhukishe amagumbi ambalwa kwigumbi lokuhlala eliphambili, kwaye wonwabele imisebenzi enjengokuqubha, igalufa elincinci, ukukhwela ihashe kunye notolo. I-Rocky Mountain National Park ekufutshane ikulungele ukuhamba intaba, ukuloba okanye ukubona izilwanyana zasendle, kwaye isondele ngokwaneleyo eDenver ukukunika usuku lwebhonasi esixekweni. Yiza ehlotyeni uzokusebenzisa ithuba lekampu yasimahla yeKhonsathi yeKhonsathi yeHlabathi.
UMark Brown / Getty Izithombe
6. Yiya kuqeqesho lwentwasahlobo lwe-MLB
Akukho buntwana bugqityiweyo ngaphandle kohambo olumbalwa oluya eballpark, ngakumbi ngexesha loqeqesho lwentwasahlobo, olwenzeka eArizona naseFlorida. Bukela amaqela amakhulu eMidlalo yeBhola ekhatywayo elungele ixesha elitsha kwimidlalo enezitshixo ezisezantsi (kunye nexabiso eliphantsi) kunexesha eliqhelekileyo. Uqeqesho lwentwasahlobo Ngokwesiqhelo kwenzeka ngoFebruwari, Matshi nangoAprili, nemihla iyahluka ngokonyaka, ngoko ke kulula ukufumana iintsuku ezimbalwa zokuya kubona iGrapefruit League (iGulf Coast kunye neTampa, eFlorida) okanye iCactus League (ePhoenix, Arizona). Jonga iihotele ezikufuphi kunye neeholide ezinikezela ngeentengiso ezizodwa zemihla yoqeqesho lwentwasahlobo xa ubhukisha.
IWigwam Village Motel
7. Lala kwiWigwam
Inkqubo ye- IWigwam Village Motel , ebekwe eSan Bernardino, California, kwiRoute 66, inike iintsapho ithuba lokulala kwiwigwam eyiyo. Kukho indawo yokubhukuda kunye ne-BBQ, kwaye i-wigwams nganye ye-19 inombane kunye neendawo zokuhlambela, ngoko ke intle ngakumbi kunenkampu. Ibhonasi: I-Motel yeCone Cone ePholileyo kwiPstrong's Iimoto yayisekwe kwiWigwam Village Motel, ke abantwana baya kuziva ngathi balungile ekhaya.
I-Adib Alim / EyeEm / imifanekiso kaFetty
8. Ukunyuka kwiYellowstone
Okwesibini-eyona nto intle ngendalo kukuba isimahla (eyokuqala kukuba intle kwaye iyoyikeka). Olunye uhambo olumangalisayo kunye nolwalamano oluhle nosapho lunokufumaneka kwi Ipaki yeSizwe yaseYellowstone . Landela umzila oya ku-Old Faithful okanye uhlolisise indlela eya eMammoth Hot Springs. Kungcono ukutyelela ihlobo okanye ukuwa kwaye akukho mvume iyafuneka ukunyuka epakini. Unokukhetha ukumisa inkampu okanye ukubopha kwenye yeendawo zokulala ezilithoba zepaki, okwenza kube lula ukuphuma ezindleleni kuqala ekuseni.
Iindidi ezahlukeneyo ze-yoga asanas
Iikhabhathi zaseMissouri zomthi
9. Hlala kwindlu yomthi
Unokwenza ibhedi encinci kwindlu yakho yasendlini, okanye unokukhetha enye into eyahlukileyo kuyo Iibhokisi zaseMissouri zeNdlu . Iikhabhathi eziphakamileyo, ezinobungangamsha zilungele ukufumana usapho kuba zibandakanya iikhitshi ezipheleleyo kunye nokufikelela kwiitoni zemidlalo yangaphandle. Iikhabhathi, nganye kuzo enoluhlu olukhethekileyo kunye nokuziva, zivulekile unyaka wonke, ke jonga izivumelwano zonyaka ezinokukugcinela imali encinci.
Ifoto ngu-ktmoffitt / Getty Izithombe
10. Intloko kwiDude Ranch
Ezinye iholide zeDude Ranch zingayaphula i-bhanki, kodwa IRancho Los Banos , eSonora, eMexico, lithuba elihle lokuba iintsapho zifunde iintambo kwifama esebenzayo ngaphandle kokuchitha ngaphezulu. Hamba ukhwele ihashe okanye uhambe intaba okanye uphume uye kwi-Jeep ecotour yendawo. Olu lukhetho olomeleleyo kubazali abafuna ukunciphisa ixesha lescreen sabantwana-i-ranch ngamava akwi-grid akhuthaza ukuhanjiswa kwedijithali ngokupheleleyo kweendwendwe (kunye, akukho Wi-Fi kunjalo).
Imifanekiso yeempelaveki Inc. / Imifanekiso yeGetty
11. Thatha uhambo lweNdlela eMini
Ukuba ukuchitha iiyure ngeeyure emotweni kunye nabantwana abangxolayo ayisiyo indebe yakho yeti, cwangcisa uguqulelo olufutshane lwendlela yonke yamaMelika. Khetha iidolophu ezimbalwa ezikufutshane okanye iindawo ezinomdla kwaye uhambe uhambo lweveki ngemoto, uqiniseke ukuba uyeka rhoqo ngokwaneleyo ukugcina uxolo. Amaketanga endlela esecaleni kwendlela, njengeMotel 6 okanye iSuper 8, ziindawo ezingabizi kakhulu ukuhlala endleleni (jonga ezinedama lokubhukuda) kwaye kungonwaba ukufumana iidinala zalapha okanye iikhefi zokutya okulungele uhlahlo-lwabiwo mali.
Ndwendwela iHershey, ePennsylvania
Yaziwa njengeyona ndawo imnandi emhlabeni, Hershey yindawo entle yosapho kwabo bafuna amava epaki yomxholo ngaphandle kwamaxabiso aphezulu esibhakabhakeni. Le dolophu ilikhaya leHersheypark kunye neZooAmerica, kunye neHershey Story Museum kunye neeHershey Gardens. Iintengiso zeehotele kulula ukuzifumana, zisenza kube mnandi kubo bobabini abantwana kunye nesipaji sakho.
13. Yenza eyakho indawo yokuhlala
Iinqwelo-moya zokubhukisha kunye nehotele zinokubiza, kodwa unokwenza ikhefu lakho ukonwaba kwikhaya lakho. Nokuba ubeka intente ngasemva kwendlu okanye unxibisa igumbi labandwendweli njengehotele enezihloko, kukho amathuba amaninzi okuphinda ulonwabo lweholide engaqhelekanga ngaphandle kokushiya indlu. Ingcebiso yepro: Uku-odola ekutyeni kuhamba indlela ende ekufumaneni ukuba uziva ukhululekile uhlala ufumana kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
UFrank noHelena / Getty Izithombe
14. Qeshisa ngephenyane lendlu
ILake Powell , Ehamba phakathi kwe-Utah neArizona, yaziwa ngezikhephe zayo ezindlini, ezinokuthi ziqeshwe ngabakhenkethi (kunye nokuqhuba) iintsuku ezimbalwa. Yindlela elungileyo yokubaleka kuyo yonke ngaphandle kobunzima obuninzi-amaphenyane anekhitshi elipheleleyo kunye neendawo zokuhlambela ezisebenzayo. Intloko ngexesha lokungabikho kwexesha ngamaxabiso atshiphu kwaye ukhethe imodeli yoqoqosho ukugcina ixabiso liphantsi. Kukwakhona nentaba eninzi ekufutshane, ukuloba, ukukhwela ihashe kunye nemidlalo yamanzi, kunye nokuthenga kwabo bafuna ikhefu kuyo yonke indalo entle.
ioyile yealmond yokukhula kweenwele
oobyek / Getty Izithombe
15. Yiya emajukujukwini
Ngokuqinisekileyo, ngekhe uthathe abantwana bakho baye enyangeni. Kodwa Ukutyelela i-Space Coast yaseFlorida okanye ukuya ku IZiko leNdawo leNASA eHouston ungakufumana usondele. I-Space Centre iHouston ineetoni zemiboniso kunye neenkqubo zeendwendwe, ngelixa i-Space Coast ibandakanya iZiko leNdawo yaseKennedy. Zombini ezi ndawo zilungele ezinye iintlobo zemisebenzi kunye nokufumana iihotele ezingabizi kakhulu okanye iholide eziqeshisayo akufuneki kube ngumcimbi.
Isoda yokubhaka ilungele ukuba mhlophe kwesikhumba
Ifoto nguDavidPrahl / Getty Izithombe
Ndwendwela iWisconsin Dells
IWisconsin Dells liziko lokuzonwabisa losapho, kubandakanya iNowa yeNqanawa yaManzi ePaki kunye neMat. Ipaki yokonwabisa i-Olimpiki. Ipaki ekufuphi yeMirror Lake State ikwabonelela ngamathuba enkampu, ukuhamba intaba kunye nokuloba, xa unokuzaliswa ziipaki zemixholo ezixineneyo. Khangela iiphakheji zeholide kunye nokujongana xa ubhukisha iholide, njengoko uninzi lweepaki kunye neehotele zibonelela ngezaphulelo okanye ubusuku bakhululekile.
UMateyu Crowley Photography / Getty Izithombe
17. Yiya kwiSafari
Akunyanzelekanga ukuba ubhabhe uye eAfrika ukuze ufumane amava endlulamthi endle. I-Safari West Animal Park , eSonoma Valley, eKhalifoniya, likhaya lezilwanyana zasendle ezingama-800, ezihambahamba kwindawo yokugcina izilwanyana zasendle. Ungathatha ukhenketho lokulondolozwa kwiJeep okanye uhlale ubusuku kwenye yeentente zokunethezeka, ezikhoyo phakathi kukaMatshi noDisemba. Iintente zibonelela ngamava amnandi kwaye abantwana abangaphantsi kweminyaka emibini bakhululekile. Bhukisha kwenye yoKumkani enamagumbi eBunk Bunk xa uhamba nabantwana.
Ifoto nguBwalls90 / Getty Izithombe
18. Intloko eya e-Ocean City
Iholide yaselwandle akufuneki ibandakanye indawo yeenkwenkwezi ezintlanu. I-Ocean City, eMaryland, yindawo enhle yokufumana iindawo ezintle zonxweme, ukusuka kwibhodi ehamba phambili ukuya kwiindawo zokuqeshisa iholide ngaselwandle, kwaye kunika ukufikelela kwi-Assateague Island National Park, apho iiponi zasendle zihamba zikhululekile. Khangela indlu yokurenta endaweni yehotele, kwaye ukuba undwendwela ehlotyeni isixeko sibonisa imovie yasimahla elwandle. Ungaphuthelwa kukuzonwabisa kweTrimper kwibhodi yeebhodi, ebonisa ukukhwela kunye nemidlalo.
Ifoto nguPhilAugustavo / Getty Izithombe
19. Wena weeDinosaurs
Inkqubo ye- IZiko leDinosaur , eThermopolis, inika iindwendwe ithuba lokumba usuku ukuze zijikeleze iisayithi zayo zokumba iidinosaur. Amava emini aya kukhunjulwa kubantwana nakubazali, kwaye ivulelekile kuyo yonke iminyaka. Ukuba unxweme olusempuma, Ipaki yeSizwe seDinosaur e-Rocky Hill, e-Connecticut, inoluhlu olukhulu lweeJurassic fossil tracks zokuphonononga. Landela iikhilomitha ezimbini zeendlela ukuze ubone zonke iindlela kunye nabantwana bakho.
20. Cwangcisa iSithuba esimangalisayo
Kukho iinkampani zokuhamba eziza kukucwangcisela iholide eyimfihlakalo, kodwa kunokwenzeka ukuba wothuse nosapho lwakho ngokwakho. Khetha kwindawo ethile ongayilindelanga, njengendawo yokubhenela kwipaki yelizwe okanye kwidolophu eselunxwemeni engaziwayo, kwaye unike wonke umntu uluhlu lokupakisha oluluncedo ngokusekwe kwindawo ekuyiwa kuyo. Ukuba ungathanda ukumangaliswa, cinga ngokusebenzisa inkampani efana nayo Ndothuse! Uhambo , eya kuthi ithathele ingqalelo uhlahlo-lwabiwo mali xa ucwangcisa.
Ezinxulumene: Idolophu esikiweyo kuwo onke amazwe
Izigaba Amanqaku Omfazi Ombane Ukutya Iincwadi
unyango lweenwele zendalo lokukhula kweenwele
iinwele ezirhangqileyo zobuso obume okweqanda
I-asanas zeyoga ezili-10 kunye nezibonelelo zazo
Iifilimu zehollywood zithanda amabali
uluhlu lweefilimu zosapho ezingama-2000
uthotho lwee-TV zosapho